ဦးသန်းရွှေနဲ့ ဘဘတွေ ထားစရာမရှိအောင်.
- ဒေါ်စုက..ဘာ..နိုင်ငံရေးကဘာ..ဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့ အာခေါင်လာမခြစ်နဲ့၊
မင်းတို့ စစ်တပ်ထဲမှာ..မင်းတို့ဘဘတွေလုပ်ထားတဲ့ ချီးထုတ်တွေကိုသာ.
- "၈၈ အရေးအခင်းမှာ အမိန့်အရ.ပစ်ခတ်ရတာပါ".လို့တော့ဆင်ခြေမပေးနဲ့၊
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 4:18 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook